Daawo muuqaalka: Hey’adda Hormuud Telecom Foundation oo shaqo u abuurtay qaar ka mid ah naafada Muqdisho |
Daawo muuqaalka: Hey’adda Hormuud Telecom Foundation oo shaqo u abuurtay qaar ka mid ah naafada Muqdisho
Mashruuca maanta ay fulisay Hay’ada Hormuud Telecom Foundation ayaa waxaa ka faa’iideystay 20 Qofood oo naafada garguuratada ah.
Gudoomiyaha Hey’ada C/llaahi Nuur Cusmaan oo ka hadlayay munaasabadda ayaa sheegay in mashruucani yahay kii labaad muddo 5 maalmood ah oo ay hay’adu jirto, isagoo xusay in mashruucii ugu horeyay ay ka faa’iideysteen haween danyar oo sidaan oo kale Hay’addu shaqo ugu abuurtay.
Munaasabadda shaqooyinka loogu abuurayey Dadka naafada ah ayaa waxaa kasoo qeyb galay Marti sharaf badan oo ka kala socday Ururrada Bulshada Rayidka, Isbitaalada qaar & Hay’adaha Gargaarka, waxaana dhammaan dadkii ka hadlay munaasabadda ay u mahad celiyeen hey’adda Hormuud Telecom Foundation & Shirkadda Hormuud Telecom oo dhinaca dhaqaalaha ka saacideysa hey’aaddan.
Shirkadda Hormuud Telecom oo ah shirkada ugu weyn dhinaca isgaarsiinta Somalia ayaa noqotay shirkadii ugu horeysay kuwa isgaarsiinta ee abuurta heyad samafal oo wax u qabata bulshada danta yar ee ay saameeyeen duruufaha adage e dalka ka jira.
Halkaan hoose ka daawo warbixintaani oo faahfaahsan